Website Creation - MMcities
ကျွန်တော်မျိုးတို့ ကုမ္ပဏီမှ Website များအား မြန်မာကျပ်ငွေ တစ်သိန်းခွဲဝန်းကျင်မှစပြီး ရေးဆွဲပေးနေပါသည်။
Corporate Website Using Content Management System
တစ်ခြား ကုမ္ပဏီနှင့် ပြုလုပ်ထားသည့် website များကိုလည်း MM Cities မှ Update ပြုလုပ်ပေးပါသည်။
ကိုယ်ပိုင် ဒိုမိန်းရှိပြီးသားဆိုလျှင်လည်း MM Cities မှ ဒိုမိန်း ကုန်ကျငွေ ၂၀ဝ၀ဝ နှုတ်ပြီး website ပြုလုပ်ပေးပါသည်။
Hosting ရှိပြီးသားဆိုလျှင်လည်း လူကြီးမင်းတို့ Hosting ပေါ်သို့ တင်ပေးပါသည်။
CMS များကို အသုံးပြုထားခြင်းကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ကိုယ်တိုင် website များတွင် တင်မည့် Post များ၊ ပုံများ၊ စာများကို Facebook သုံးသကဲ့သို့ လူကြီးမင်းတို့ကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်နိုင်၊ တင်နိုင်ခြင်း ( လူကြီးမင်းတို့ မအားလပ်၍ မလုပ်နိုင်ပါက MM Cities မှ လိုအပ်ပါက ပြုလုပ်ပေးပါသည်။)
ပုံများ၊ စာများကို တင်နိုင်ရန်၊ ပြောင်းနိုင်ရန် website ပြီးစီးပါက MM Cities အခမဲ့ Training ပေးခြင်း
မည်သည့် ဖုန်းနှင့် မဆို၊ မည်သည့် tablet & Desktop နှင့် မဆို၊ မည်သည့် Browser နှင့်မဆို ကြည့်ရှု၍ အဆင်ပြေပြီး အသုံးပြုရ လွယ်ကူခြင်း
ေနာက်ဆုံးပေါ် နည်းပညာများကိုသာ အသုံးပြုပြီး ရေးဆွဲပေးထားခြင်း
လူကြီးမင်းတို့ လိုအပ်သည်များကို ညှိုနှိုင်း၍ စိတ်တိုင်းကျ ဝန်ဆောင်မှု ပေးခြင်း
Device များမှ လူကြီးမင်းတို့ website အား လွယ်ကူစွာ ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ခြင်း
ကိုယ်ပိုင် Business webmail account များကို အကန့်အသတ်မရှိ ဖွင့်နိုင်ခြင်း
24 နည်းပညာဝန်ဆောင်မှု ရှိခြင်း
website တွင် တင်မည့် စာသားနှင့် ပုံများကို လိုအပ်ပါက ကူညီပေးခြင်း
လိုအပ်သည် မည်သည့် domain အမျိုးအစား မဆို ရနိုင်ခြင်း ( eg : .com/ .net, .org/ .info/ .edu etc.,)
Website နှင့် ပတ်သက်ပြီး ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးကို အပ်နှံသည့် ကုမ္ပဏီအား ပေးခြင်း
Google တွင် အလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်သော SEO ပါဝင်ခြင်း
အကန့်အသတ်မရှိ ဝဘ်ဆိုက် သိုလှောင်ပမာဏ ရှိခြင်း (Basic website များ မပါ)
အကန့်အသတ်မရှိ ဒေတာပို့လွှတ်နှုန်း ရှိခြင်း (Basic website များ မပါ)
Google Map ပါရှိခြင်း
Social Network များနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးခြင်း
Website Backup ထားရှိခြင်း
၀ဘ်ဆိုဒ်ဒီဇိုင်းများကို မကြိုက်သရွေ့ ပြင်ဆင်ပေးခြင်း
ဝဘ်ဆိုက် နှင့် ဖေ့ဘုတ် ကွာခြားချက်
၀ဘ်ဆိုက်သည် အင်တာနက်ပေါ်မှ လူကြီးမင်းတို့ဧ။် ကုမ္ပဏီခွဲ တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့ဧ။် လုပ်ငန်းများကို ဝန်ထမ်းမလိုဘဲ ၂၄ နာရီ အချိန်ပြည့် အင်တာနက်ပေါ်မှာ ဝယ်သူများကို လူကြီးမင်းတို့ဧ။် လုပ်ငန်းအကြောင်းအရာများကို ရှင်းပြနေ၊ ကြေငြာနေ၊ ရောင်းချပေးနေသော အင်တာနက်ကုမ္ပဏီခွဲတစ်ခုဟုဆိုလျှင်လည်း မမှားပေ။
ျမန်မာနိုင်ငံတွင် Facebook သည် လူသုံးများသော အပလီကေးရှင်းတစ်ခု၊ website တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Facebook သည် လူအများအသုံးပြုရန် အကောင့်များကို အခမဲ့ ဖွင့်ပေးပြီး facebook ကြေငြာခများမှ ပြန်လည် ဝင်ငွေရယူကာ စီးပွားရေးလုပ်နေသော Social Website နှင့် Social App တစ်ခုသာ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် စီးပွားရေး လုပ်သူများအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံဧ။် လူသုံးများမှုကြောင့်သာ Facebook တွင် အကောင့်ဖွင့်ပြီး စီးပွားရေးကြေငြာများ ပြုလုပ်သင့်သော်လည်း မိမိတို့ လုပ်ငန်းအတွက် ကိုယ်ပိုင် Website တစ်ခုလည်း မဖြစ်မနေ ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် Facebook မသုံးရသော နိုင်ငံများလည်း ရှိနေသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ်ပိုင် website ရှိထားပါက မည်သည့် နေရာ၊ မည်သည့်နိုင်ငံတွင်မဆို မိမိတို့ဧ။် လုပ်ငန်းကို အလွယ်တကူ ရှာဖွေ ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Facebook တွင် မိမိလုပ်ငန်းနာမည်တူများ တစ်ခုထပ်မက ရှိနိုင်ပါသည်။ ပြီးလျှင် မိမိတို့ တင်ထားသည့် ပို့စ်များကိုလည်း ရှာဖွေပါက အလွယ်တကူမရှာဖွေနိုင်ပါ။ အရင်တင်ထားသည့် ပိုစ့်များကို ရှာဖွေမည်ဆိုပါက အောက်ကို အများကြီး scroll ဆွဲ၍ ရှာဖွေရပါသည်။ ကိုယ်ပိုင် website ထောင်ထားပါက မိမိတို့ ကုမ္ပဏီနာမည်သည် တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် မိမိတို့ တစ်ဦးထဲသာ ရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။ မိမိတို့ လုပ်ငန်းအကြောင်းအရာများကို website တွင် စနစ်တကျ ကဏ္ဍအလိုက် ထည့်သွင်းထားသောကြောင့် ရှာဖွေသူများလည်း အလွယ်တကူ ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ ပိုပြီးလည်း လုံခြုံစိတ်ချရပါသည်။
” လူကြီးမင်းတို့ဧ။် နည်းပညာနှင့် ပတ်သက်သော အခက်အခဲများကို ကျွန်ုပ်တို့ MM Cities မှ တာဝန်ယူ ဖြေရှင်းပေးပါရစေ..”
(+95) 09 5044868, 09 420231252
Office (1). No(150), 47 th street, 10 Yard, Botahtaung Township., Yangon and
..Office (2).No.(008), Lake kan St., (7) Ward, Pazundaung Tsp., Yangon.